Ingabe unayo imoto ozithandayo, futhi ufuna ukwenza kube ngisho ingilazi ikhange nakakhulu toned? Ingabe ucabanga ukuthi lokhu kunzima kakhulu futhi ngeke babhekane ngaphandle kosizo wizadi? Ngemva kokufunda lesi sihloko, uzoqaphela ukuthi amaphutha amakhulu futhi uthole impendulo yombuzo othi, "indlela ukunamathisela tint?"
Njalo umshayeli uthanda imoto yakhe, uyabakhathalela wakhe, uyawathena, izona kanye kuhlobisa. Toning kuze muva kwaba nesisekeli esisemqoka izimoto kakhulu. Umbala komkhawulokudonsa toned ingilazi, ngaphambi ukwamukelwa ukuchibiyela zakamuva iziqondiso babe kuyindaba yangasese of umshayeli ngamunye. Senzelwe iqoqo imithetho izinguquko endleleni namuhla elawula blackout ovumelekile. Ngokwe isinqumo esisha, umthamo we windscreen akufanele kube ngaphansi kuka-75%, ohlangothini izibuko survey - hhayi ngaphansi kuka-70%. Ukwephula lezi ziqondiso kuholela isigwebo zokuphatha. Kumele kukhunjulwe.
Indlela ukunamathisela tint
Uma unquma ukuya, akufanele ukuthenga ifilimu ezishibhile: kuba umncane kakhulu futhi ephelele ngeke ukuthole ummese akhethekile spatula, okwakuyoholela kufanele uthenge ngokwehlukana. Ukuze induku amanikiniki ezomile esizayo, ingilazi wezindlu kanye USiphon, okuyinto batheleka efanayo ingilazi wezindlu.
Manje ukuthi konke okulungiselelwe kudingekile, ungakwazi ukuqhubeka ngqo inqubo ukuhumusha. Umsebenzi kufanele kwenziwe endaweni efudumele futhi okungcono nge umsizi. Uma ababambelela ifilimu kuzokwenzeka emgwaqeni, kutuswa ukuba afeze zonke izinyathelo e sezulu ezolile, ezingeni lokushisa ejenti hhayi ngaphansana 20 C. ingilazi kufanele kahle bahlanza ehlanganisa i utshwala. It lihlanza futhi degreases ebusweni. Ngemva ingilazi usuwomile, tinting ifilimu sisetshenziswa. Lapha kumelwe siqaphele: Musa usike impahla ngokuqinile ngokuvumelana nentaba. nakanjani kudingeka ushiye 3-4 cm nesabelo azungezile.
Film Corner ngokucophelela ukuba ngixhumane futhi behlukanisiwe isizinda. Kulesi USiphon wafutha isixazululo lwenkomo olufakwe amanzi ukuze obubi ukuvimbela adhesion. I ahlukaniswe ungqimba amnyama lisetshenzisiwe ingilazi kanye plastic spatula eshelelayo ngokucophelela. Isiqondiso motion spatula kufanele kube kusuka sosizo ukuze azungeze. Ngezinye izikhathi, ifilimu kufanele ahlanze ngendwangu emanzi. imiphetho Extra ophumile bafa ngommese obukhali, okumele ezipakishiwe. toned kanye namawindi ohlangothini.
Manje kufanele ukuthola indlela unamatsisela tint ku window labaqaphi elingemuva. Akubona bonke abashayeli bangakwazi kahle beka ifilimu ngaphandle balikhipha nasezinguqulweni umshini. On Vaz izimoto isuswe intambo, futhi ingilazi uyakhanywa. Njengoba umsebenzi kuzokuhlupha (ngenxa ezakheke ayizindunduma), le nqubo ihlukaniswe izigaba ezimbili. Imaginary umugqa iwindi ihlukaniswe izingxenye ezimbili. Ukuze nengxenye eyodwa ifilimu isicelo. It sanqunywa ne izibonelelo efanayo ohlangothini amafasitela (2-3CM). Uma imibimbi, kudingeka ukwakhiwa hairdryer. Bona shisisa ifilimu futhi welulela nje ngeke kube khona imibimbi. Ingxenye yesibili isidingo ukunamathisela kuphela joint futhi akukho okunye. Lapho beqeda, ingilazi isethwe endaweni.
Sekuwumkhuba kutsha ingilazi nje kuphela kodwa futhi headlamps kanye taillights. tinting okunjalo izibani - kuwumsebenzi onzima, futhi ngaphandle yalutho. Ngempela, ngokuhamba kwesikhathi emaphethelweni ifilimu uzoqala izinhlayiya zeqhwa off, futhi ngeke ashayele yonke imisebenzi ababhubhayo. Futhi isicelo vinyl befilimu hood, umzimba kanye fenders, okwenza imoto yakho hhayi kuphela enhle, kodwa futhi yasekuqaleni.
Thina esiphethweni kanjani ukunamathisela tint. Lena akunandaba ngempela. Sidinga kuphela kancane nesineke futhi ngommese obukhali. Nokho, Ungeqisi it ne dimming. Kungcono ukunamathisela ifilimu kuphela amafasitela labaqaphi elingemuva. Khumbula ukuthi ngenxa yokwephula izidingo PPD ngoba iwindi tinting kuyinto penalty inani ruble 500, futhi ngonyaka 1.07.2012 - ungase uhlale.
Imininingwane! inani esihle akuxhomekile bangaki izibuko camera nge sekugcineni mnyama futhi yini ukukhanya ukudluliswa "bomdabu" imishini amafasitela. Ngakho-ke, uzinqumela ukuthi udinga ukwazi ukuthi lezo tint.
Ukuhlanza Imibhobho esemzimbeni - umcimbi ezokwenza ugweme izindleko ezengeziwe
Indlela ukusetha i-subwoofer emotweni? Ikhishiwe inqubo incazelo
"Porsche 918": izici lobuchwepheshe omunye Supercar umxhwele kakhulu German
Vaz-2114, Transmission: kudivayisi kanye nokulungiswa
Imfihlo yokuba sibalo ephelele USindi Krouford utholwa yibo bonke!
ASM-012: Ukucaciswa, imiyalelo. abanikazi Izibuyekezo
Retardation kwengqondo - yisona ukubambezeleka, ukubambezeleka zentuthuko. Ukushesha kanye retardation
Welding Spot: semfundo
Metro (Kazan): Incazelo